Kadib go’aan ruqsad degnaansho oo usoo guurid qof ku nool Iswi­idhan - Migrationsverket
Kadib go’aan ruqsad degnaansho oo usoo guurid qof ku nool Iswiidhan
Haddii Hey’adda socdaalka oggolaansho kaa siiyo codsigaada oo ruqsadda degnaanshada waxaa adiga lagu siin kaarka oo ruqsadda degnaanshada oo caddeyn in adiga xaq u leedahay inaa Iswiidhan joogtid. Haddii Hey’adda socdaalka diidmo ka siiyo codsigaada adiga waxaa haysata fursad aad go’aankas rafcaan uga suubsatid haddii aadan ku qanacsaneen.
Haddii shar­ciga degge­naans­haha ah laguu oggo­laaday
Kaarka shar­ciga degge­naans­haha
Haddii aad u baahan tahay fiise aad wadanka Iswi­idhan ku timaado
Haddii aad Iswiidhan tagi kartid fiiso la’aan waxaa suurtagal ah inaa adiga ubaahatid inaa tustid kobi oo warqada go’aanka oggolaanshadamarka aad wadanka soo galeysid. Waxaa xita suurtagal ah inaa adiga ubaahantahay inaa tustid warqada la dhaho Warbixin ku saabsan kaarka ruqsada degnaanshada[Information om uppehållstillståndskort] iyo warqada go’aanka oggolaanshada.
Warbixin ku saabsan kaarka ruqsada degnaanshada – kala soo bax kombiyuutarka iyo horey usii qaado marka aad safar aadeysid (oo luqad iswiidhish iyo ingiriis)
Marka aad Iswiidhan imaatid waa in sida ugu dhaqsaha badan wakhti ballan ka suubsatid xafiiska Hey’adda socdaalka si sawirka faraha iyo wejiga lagaaga qaado. Marka aad imaaneysid xafiiska Hey’aada socdaalka horey usoo qaado baasaaboorkaada. Marka laguu diyaarsho kaarka ruqsada degnaanshada waxaa laguugu soo diri bostada cinwaanka gurigaada oo Iswiidhan.
Ka shaqee wadanka Iswi­idhan
Marka adiga laguu oggolaado in lagu siiyo sharciga deggenaanshaha si aad ugu soo guurto qof wadanka Iswiidhan deggen waxaa iyadana sidoo kale laguu oggolaanaya in aad wadanka Iswiidhan ka shaqaynkartid. Haddii xitaa lagu siiyo sharci deggennaanshaha joogtada ah waad ka shaqaynkartaa wadanka Iswiidhan.
Ilaa iyo inta uu shaqay­nayo oggo­laans­huhu
Lamaa­naha isqaba, lamaa­naha isku diiwaang­ashan iyo kuwa nolosha wadaaga (sambor)
Carru­urta ka yar 19 jirka
Haddii xiri­ir­kiina guurku dham­maado
Haddii hey’adda laanta socdaalku diido codsigaaga
Haddii hey’adda laanta socdaalku diido codsigaaga macnaheedu waxa weeye adigu markaa xaq uma lihid in aad wadanka Iswiidhan sharciga deggenaansho ah ku joogto. Waxaad doorankartaa in aad ka dacwooto oo aad rafcaan ka qaadato go’aanka lagaa gaaray muddo sadex usbuuc gudadeeda ah iyada oo laga bilaabayo maalinta laguu sheego go’aanka lagaa gaaray. Macluumaadka ku saabsan sida aad uga dacwoonayso wuxuu ku yaalaa warqadda go’aanku ku qoran yahay. Haddii uu jiro qof aad wakiilatay oo aad siisay awood inuu adiga wakiil kaa noqdo markaa qofkaas ayaa kuu dacwoonkara.
Halkan ka akhri macluumaad dheeraada oo ku saabsan sida looga dacwoodo ee rafcaaka looga qaato
Haddii aad ku sugan tahay Iswiidhan marka diidmada lagaa siiyey codsigaaga waxaad ku khasban tahay in aad wadanka ka baxdo wakhtiga ku qoran go’aanka laguu soo diray.
Ka akhriso warbixin dheeraada waxa adiga ku khuseeya marka lagaa siiyo diido codsigaaga adiga oo joogo Iswiidhan
Si aad isu diiwaangeliso oo aad u hesho tobanka lambar ee iswiidhishka (personnummer) waxaad u tegeysaa Hey’adda cashuurasha (Skatteverket).
Si aad ugu qornaato nidaamka ammaanka ee arrimaha bulshada waxaad u tegeysaa Xafiiska caymiska bulshada (Försäkringskassan).
Haddii aad Iswiidhan ku timid qaxooti ahaan waxaad haystaa fursad ah in aad dalbato lacagta deynta ah oo aad guriga ku qalabaysato. www.csn.se/hemutrustningslan
Su’aalaha ku saabsan daryeelka caafimaadka waxaad la xidhiidhaysaa gobolka aad deggen tahay. Daryeelka caafimaadka wadanka oo dhan waxaad ka heleysaa 1177 Hagaha daryeelka caafimaadka.
Su’aalaha khuseeya barashada luqadda iswiidhishka ee dadka ajaanibka (SFI) waxaad kala xidhiidhaysaa degmada aad deggan tahay. Ka eeg xitaa bogga internetka ee Degmooyinka wadanka Iswiidhan iyo maamulada gobolada caafimaadada (Sveriges kommuner och regioner).
Haddii aad shaqo raadsanayso waxaad iska diiwaangelinaysaa Xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen).
Hey’adda hawlgabka waxay haysaa warbixin luqadda iswiidhishka ku qoran oo ku saabsan dadka wadanka Iswiidhan yimaada wakhti dambe iyagoo da’ weyn kuwaas oo hela lacag yar oo hawlgab ah ama aan waxba helin.
Warbixinaha ku saabsan waxbarashooyinka ilaa heer sare ama heer jaamacadeed waxaad ka heleysaa Antagning.se ama studera.nu.
Su’aalaha khuseeya lacagta la siiyo qofka waxbaranaya waxaad kala xidhiidhaysaa Rugta kaalmada waxbarashada (CSN, Centrala studiestödsnämnden).
Su’aalaha khuseeya liisanka baabuurka waxaad kala xidhiidhaysaa Wakaalada gaadiidka (Transportstyrelsen).
Su’aalaha khuseeya xaq u lahaanshaha codaynta waxaad la xidhiidhaysaa Hey’adda doorashooyinka (Valmyndigheten).
Warbixin ku saabsan dugsiyada/iskuulada wadanka iswiidhan waxaad ka heleysaa Wasaaradda waxbarashada Arrimha iskuulada iswiidhan.
Wabixino ku saabsan bulshada wadanka Iswiidhan oo luqado kala duwan ku kala qoran waxa laga heleyaa Macluumaad wadanka Iswiidhan ku saabsan (Information om Sverige).
Warbixino intaa dheer oo bulshada Iswiidhan ku saabsan waxa laga heleyaa Bpgga internetka machadka iswiidhishka.
Iswiidhan way salaaman tahay! (Hej hej Sverige!) waxa filin gaaba oo kugu dhiirigelinya sida uu wadanka Iswiidhan u shaqeeyo.
Bogga baro luqadda iswiidhishka www.informationsverige.se waxaad ka heleysaa leenkyo kala duwan oo ku geynaynaa borogaraamo badan sidii aad adigu keligaa isu bari lahayd luqadda iswiidhishka.
Adeegyada khuseeya macluumaadyada Hey’adda macaamiisha (Konsumentverkets upplysningstjänst) waxaad ka heleysaa tallooyin ku saabsan su’aalaha marka aad wax soo iibsato ama aad heshiisyo saxiixdo.